Modern Art Galleries In Eoropa Ary aiza no ahitana azy ireo | Save A Train
Home > Travel Europe > Modern Art Galleries In Eoropa Ary aiza no ahitana azy ireo
Tia ny zavakanto maoderina dia manana toerana maro mba hitsidika any Eoropa. Noho izany harena ny safidy, angamba ampahany sarotra indrindra ny mifidy ny toerana halehany. Na izany aza, raha toa ianao mitady fitsidihana Eoropa kanto indrindra ho an'ny fitrandrahana toerana mafampana, fa nahoana no tsy drafitra ny diany manodidina azy? Ny sasany tsara nomanina mitaingina fiaran-dalamby, azonao atao ny mitsidika ny rehetra Top Picks ny fampirantiana zavakanto maoderina any Eoropa:
Tate Modern Art gallery in London dia iray amin'ireo vanim-potoana malaza indrindra fampirantiana zavakanto maoderina any Eoropa. Tsy irery no nitsidika tao an-tanàna, izay mirehareha ny 1,000 lalan-. Na izany aza, izany dia ny anankiray izay malaza indrindra amin'ny mpizaha tany. Tate Modern tamin'ny voalohany tafiditra ao anatin'ny Tate Gallery, izay naorina tamin'ny 1897. Rehefa ela, Nanomboka Tate fanitarana sy 2000 dia vaky ho efatra samy hafa lalan-. Out of ireo efatra, Tate Modern no iray amin'ny fitsidihana indrindra, Ary ity tranon'ny fotsiny zavakanto. Raha maniry ny hiaina ny kanto London toerana ho anao, dia afaka mora foana hanatratra ny tanàna lamasinina avy amin'ny lehibe indrindra Eoropa tanàna.
Ny National Gallery ny Modern Art sy Contemporary, Roma, Italia
Nantsoina The National Gallery ny Modern Art sy Contemporary amin'ny teny italiana, kanto ity Gallery amin'ny Roma manana ny zavatra rehetra ilainao. Ary vao haingana nahazo fijery vaovao vaovao, ka ny zavakanto mba hitsangana avy mainka amin'ny fampirantiana. Tsy manam-paharoa ity Gallery amin'ny fomba fampahafantarana. Tsy Mifantoka bebe kokoa amin'ny lohahevitra, loko sy ny endrika noho ny fitoviana ny eras sy ny fomba. Izany dia mamela ny vahiny rehetra hiaina ato vaovao, fomba tsy manam-paharoa, antoka fa ny fitsidihana tsy hay hadinoina ho. Roma no tanàna lehibe hitsidika lamasinina. Misy ny sasany Toerana mahafinaritra lalana afaka mandeha eny an-dalana ianao bebe kokoa an'i Italia.
Kunsthalle Zurich, Soisa
Soisa ny niara-belona sy ny toe-javatra zavakanto maoderina dia tànana hafa kely sy mavitrika, amin'ny fitandremana azy lalan-maro velona. Ny olona izay matetika hirotsaka ho amin'ny fitsidihana ny Kunsthalle Zurich. Manana fampirantiana tsy maharitra izay tsy tsy mahaliana ny vahiny. Ireo fiovana matetika manampy ny Kunsthalle reinvent ny maha isaky ny. Afaka tonga Zurich lamasinina avy Munich, Vienna, ary koa ny hafa izay vangianao tanàna eoropeanina eo amin'ny zavakanto maoderina mihaza.
Pompidou, Paris, Frantsa
No fitsidihana ny fampirantiana zavakanto maoderina any Eoropa no tanteraka tsy misy nitsidika Paris, Frantsa. Na izany aza, raha tokony ho ny Louvre, sasin-tenin'ny dia mampiseho ny Pompidou. Tsy ho hitanao an'ireo trano tsy manam-paharoa rafitra rehetra ao aminy escalators, fantson-drano, ary ny vy toe hita eo amin'ny ivelany. Fa ny zava-nitranga dia tsy mifarana any, tahaka ny Pompidou Maherin'ny 50,000 Miasa amin'ny famoriam-bola. Izany no iray amin'ny lehibe indrindra fanangonana ny maoderina sy zavakanto maoderina izay mendrika tokoa ny fitsidihana. Get any Paris lamasinina avy any London, Amsterdam, Brussels sy ny tanàna hafa tany Eoropa.
Ankehitriny any Eoropa fampirantiana zavakanto dia tokoa ny fahitana ny mahita. Ny tsara indrindra mikasika ny mieritreritra ny zavakanto-mirona fitsidihana dia ny hoe izany tanàna rehetra izany dia mora tonga ny fiaran-dalamby. Raha toa ianao vonona ny handeha, Boky Ny Fiaran-Dalamby Tapakila dieny izao, ary hifaly ny mitaingina!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmodern-art-galleries-europe%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml ary afaka hanova ny / en mba / nl na / de sy ny maro hafa fiteny.
europetravel London longtrainjourneys soso-kevitra trainjourney Tranride fiarandalamby travelswitzerland